रअका प्रमुख गोयल नेपालमा, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र शहिदको रगतको अपमान - Sawal Nepal
काठमाडौं उत्तम रिजाल २०७७ कार्तिक ६, १३:०१
भारत सरकारको गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामान्तकुमार गोयल नेपाल आएका छन् । उनी नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । तर उनी नेपाल आएको बारे एक समय भारतले अतिक्रमित जमीन फिर्ता नगरे सुरुङ्ग युद्ध लड्ने बताउने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको अहिलेको सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा नै बेखबर बनेको छ ।
रअका प्रमुख र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भेट वार्ता नै भएको छ । यसले ओलीको असली राष्ट्रवाद पनि छताछुल्ल भएको छ । एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको गुप्तचर विभागको प्रमुखलाई भेट्न समय दिनु र बार्ता गर्नु राष्ट्रघात हो । लम्पसारवाद हो ।
एउटा सार्बभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा अर्को देशको गुप्तचर निकायको प्रमुख खुलेआम आउनु र शिर्ष तहमा भेटघाट गर्नु राष्ट्रका लागी दुर्भाग्य हो । कतिपयले यस विषयमा नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया नआउनुलाई नेपाली नेताहरु नै भारतीय रअका एजेण्ट भएको दाबी गर्छन । नाम नखुलाउने शर्तमा एक पुराना कम्युनिष्ट नेताले भन्नुभयो, नेपालका सर्वहारा वर्गको नेतृत्वनै भारतीय रअका एजेण्ट भएका छन् । उनीहरु भारतकै लागी राजनीति गरिरहेको मैले बुझेको छु ।
किनकी हिजो जे जे भनिएर युद्ध गरियो अहिले ति सबै विर्सिएको छ । यो सबै भारतमुखी राजनीतिको दृश्य हो । भारत जे चाहान्छ यिनीहरु त्यही गर्छन् । जुन नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र शहिदको रगतको अपमान हो । त्यसोत नेपालमा जातीय राज्यको मुद्दा उठाउने तात्कालिन माओवादीले अहिले आफ्नो नाम मात्र फेरेको छैन कि, उसको सम्पूर्ण एजेण्डानै फेरेको छ । उसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा एक दिनपनि विगतका असमान सन्धी सम्झौताको कुरै गरेन् ।
चुपचापसँग सत्तामा बसिरह्यो । नत हिजो भनिएका जातीय राज्य नै घोषणा गर्यो । पछिल्लो पटक नेकपाको अध्यक्ष प्रचण्ड नै भएको यो दुईतिहाईको सरकारको नेतृत्व समाल्दा पनि उनैको पार्टीले प्रचण्डहरुले युद्धताका देखि संविधानसभा सम्म पुग्दापनि उठाएको नेवा राज्यको नाम राख्न भुलेनन मात्र, उनै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले ३ नम्बर प्रदेशको नाम बागमती राख्न ह्वीप जारी गर्यो ।
जुन युद्ध मोर्चामा होमिएका हजारौं योद्धा र शहिदको भावना विरुद्ध थियो । देशमा १४ ओटा गण राज्यको घोषणा गरेको प्रचण्ड नेतृत्वले दुई तिहाइको नेतृत्व गरिरहदा र दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशका आफ्नो दुई तिहाई हुँदा समेत ती जातीय राज्यको नाम प्रस्ताव नगर्नुलाई यिनीहरुको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई अर्थपूण रुपमा हेरिएको छ ।
साथै त्यहि युद्धमोर्चाका नाइके मध्येका एक डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी छोड्नु र जातीय द्धन्द्ध फैलने खालका अभिव्यक्ति दिनुले पनि सो सशस्त्र युद्ध राष्ट्र र जनताका लागि नभई, भारतकै योजना र डिजाइनमा भएको बुझाई पछि छ । हिजो त्यत्रो उफ्रने र कुर्लिनेहरु आज रअका प्रमुख नै आफ्नो देशमा खुलेआम हिड्दा किन चुप छन ? यो आम देशभक्त नेपालीले सोच्नै पर्ने बेला आएको छ ।
हिजो आफ्नै दाजुभाईको छातीमा गोली ठोक्दै अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद भन्नेहरु भारतीय दलाल होसियार भन्नेहरु, अतिक्रमित जमीन फिर्ता नगरे सुरुङ्ग युद्ध गछौं भन्नेहरु कुन दुलोमा छन ? नेपाल आमाको छातीमा खुलेआम परेड खेल्ने रअका एजेण्टहरुदेखी प्रमुख सम्म आउँदा किन निधाइरहेका छन यिनीहरु सबै गंभीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।
गरिब नेपालीहरुका गासको जोहो गर्न मरुभुमीमा तोतो घामसँग परेड खेल्न गएका आफ्ना छोराछोरीहरुसँग एक छाक खाएर भएपनि साँझ बेलुका बोल्ने माध्यम बनेको एनसेल तथा टेलिकमको टावर हान्दै आँफूलाई खुब क्रान्तिकारी ठान्ने प्रचण्ड पथका क्रान्तिकारी योद्धादेखि विप्लवका अनुयायीहरु यतिवेला कहाँ हुनुहुन्छ हजुर ?
तपाईहरुको उपस्थिति खोई ? के साच्चिकै तपाईहरु देशभक्त नै हो ? कि विक्री भइसक्नु भयो तँपाईहरु पनि भारतीय दलालहरुसँग ? यो आम नेपाली भुमीपुत्रहरुको प्रश्न हो । मेरो पनि प्रश्न हो । आँखिर तपाईहरु को हो ? जबकी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको खुफिया एजेन्सीको नाइके खुलेआम छाती खोलेर हिडिरहेको छ ।
अनि तपाई क्रान्तिकारीहरु कुम्भकर्णको रुपधारण गरेर मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ । धिक्कार छ तपाइहरुको क्रान्तिकारीता र राष्ट्रवादको हुतिहारा प्रवृतिप्रति । लम्पसार वाद प्रति ।
सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुले पार्टी भक्त भएर होईन, एक सच्चा नेपाली भएर एक पटक सोच्न आबश्यक छ । अन्यथा मुलुक सिक्किमी करणदेखि फिजी, तथा सोभियतसंघको बिभाजित दृश्यको अर्को अध्याय नहोला भन्न सकिन्न । चेतना भया ।